What does Zimbabwe import from South Africa? - Hai Afrika!
What are the major imports and exports of Zimbabwe?
Who does Zimbabwe import from?
What do they trade in Zimbabwe?
What are the major exports of Zimbabwe?
What mineral products does South Africa import?
Zimbabwe’s imports 2020 by country
South Africa with a share of 49% (2.48 billion US$) Singapore with a share of 10.8% (548 million US$) China with a share of 9.32% (470 million US$) India with a share of 3.21% (162 million US$)
Zimbabwe imports from South Africa worth US$ 2,458 million, with a partner share of 39.28 percent. Zimbabwe imports from Singapore worth US$ 1,356 million, with a partner share of 21.66 percent. Zimbabwe imports from China worth US$ 358 million, with a partner share of 5.71 percent.
In 2020, South African importers spent the most on the following 10 subcategories of mineral fuels-related products.
Crude oil: US$5.1 billion (down -42.4% from 2019)
Processed petroleum oils: $3.6 billion (down -20.4%)
Petroleum gases: $359.2 million (down -15.5%)
Electrical energy: $239.8 million (down -7.8%)